PSG Oo Wada-Hadallo La Furtay Zinedine Zidane Kaddib Guul-darradii Man City - Laacib
HomeWararka CiyaarahaPSG Oo Wada-Hadallo La Furtay Zinedine Zidane Kaddib Guul-darradii Man City
PSG Oo Wada-Hadallo La Furtay Zinedine Zidane Kaddib Guul-darradii Man City
Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa wada-hadallo la furtay tababarihii hore ee Real Madrid ee Zinedine Zidane kaddib guul-darradii ay xalay kala kulmeen Manchester City oo 2-1 kusoo garaacday kulan ka dhacay Etihad Stadium.
PSG ayaa la rumaysan yahay in aanay kalsooni badan ku qabin Mauricho Pochettino, waxaanay doonayaan inay ka takhalusaan marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan, taas oo fursad fiican u noqon doonta Manchester United oo iyaduna doonaysa tababaraha reer Argentina.
Lionel Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe ayay ku dul-ciyaareen xiddigaha Pep Guardiola, kuwaas oo qaybtii hore kubadda ka ilaaliyey, gool ay bilowga qaybta dambe la hormareenna meesha ka saaray.
Warka sheegaya in PSG ay wada-hadallo la bilowday Zinedine Zidane ayaa farxad siinaya Manchester United oo doonaysa tababare Mauricio Pochettino, si uu ugu beddelo Ole Gunnar Solskjaer oo Axaddii shaqada laga caydhiyey.
Michael Carrick oo si ku-meelgaadh ah loogu magacaabay shaqada ayaa waxa uu guul ku bilowday kulankii koowaad oo ay Villarreal ku garaaceen 2-0, waxaana uu shaqadan sii haynayaa illaa inta ay ka helayaan tababare cusub oo si kumeelgaadh ah xilka ugu sii haya illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Mauricio Pochettino ayaa la rumaysan yahay in Sir Alex Ferguson uu doonayo inuu xilkan qabto, laakiin ma heli doonaan illaa inta uu xilli ciyaareedku dhamaanayo, taasina waxay keenaysaa inay magacaabaan tababare cusub, iyaga oo wada-hadallo kula jira Enresto Valverde oo la sheegay inay maalmihii ugu dambeeyey wada-hadlayeen.